Fitantanana ny rano: naneho ny fahavononany ny sehatra tsy miankina | NewsMada
Vita ny atrikasa niarahan’ny ministeran’ny Rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana, notarihin’ny minisitra Rakotovelomanantsoa Voahary, niaraka amin’ireo tsy miankina miantsehatra amin’ny tontolon’ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana.
Nandrasana tamin’izany ny fifampizarana sy ny fanoloran-tenan’ireo mpisehatra sy mpiara-miombona antoka ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana izay amafisin’izy ireo amin’ny fandraisany andraikitra eo amin’ny rafitra famatsiam-bola ho fampandrosoana izany sehatra izany manerana an’i Madagasikara.
Manodidina ny 50 ireo sehatra tsy miankina nametraka fanamby, omaly, fa hiara-dalana amin’ny minisiteran’ny Rano amin’izany fitantanana ny fotodrafitrasan’ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana izany.
Mipaka ho an’ny olona rehetra ny tanjona amin’ity fiaraha-miasa amin’ny orinasa tsy miankina ity. Ao anatin’ny fitsinjarana asa ireo orinasa ireo amin’izao fotoana izao. Hiparitaka manerana ny Nosy ny andraikitra.
“Tanjona ny hampaharitra ny fotodrafitrasa napetraka sy mbola hatao ka izany indrindra ny anton’izao fampandraisana andraikitra azy ireo izao”, hoy ny minisitra. Voaporofo fa tsy vitan’ny fikambanana tsotra sy ny kaominina ny fitantanana ny fotodrafitrasan’ny rano sy fidiovana ka izany indrindra ny antony hidirana amin’izao fampandraisana anjara ny sehatra tsy miankina izao.
Tsy fampananana rano madio fisotro ihany fa hojerena akaiky ihany koa ny momba ny fahadiovana sy ny fidiovana izay mifandray ary tsy afa-misaraka.